Meydka Gabar yar oo muddo la la’aa oo laga helay gobolka Galgaduud | Keydmedia
Meydka Gabar yar oo muddo la la’aa oo laga helay gobolka Galgaduud
Dilkan foosha xun ee Gabadha ayaa cabsi ku baarey shacabka ku nool degaanka, gaar ahaan waalidiinta oo amniga Caruurtood u welwelaya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wararka laga helayo gobolka Galgaduud, ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in degaan lagu magacaabo Ceyn oo ku dhow Godinlabe laga helay maanta meydka Gabar yar oo muddo laba toddobaad ah la la’aa.
Caasho Maxamed Shanle, oo 11 jir ahayd ayaa qoyskeeda raadinayey 15 maalmood, iyadoo loo maleynayo in la afduubtay kadibna la gowracay. Meydkeeda waxaa lasoo dhagay tuulo u dhow Godinlabe saacadihii hore ee Maanta oo Isniin ah.
Gacmaha iyo Lugaha ayaa laga xiray Gabadha, waxaana lagu gowracay mindi. Si rasmi ah looma oga cida dishay, laakiin wararka ayaa sheegaya in looga shakiyey habaryarteed oo ay la nooleyd, taasoo geysay degaanka lagu dilay.
Sanadkii tagey horaantiisa, waxaa Gaalkacyo dhinac Waqooyi lagu kufsaday, laguna dilay Caa'isha Ilyaas Aadan, oo 12 jir ahayd. Dhacdooyinka noocan ah ayaa ku badan Mudug iyo Galgaduud.